Olee otú adịgide adịgide Hichapụ ozi ịntanetị site na iPad
Ọ pụrụ ịbụ mara mma dara mbà n'obi mgbe ị na-emeghe gị iPad, ịchọta ọtụtụ narị ozi ịntanetị unread na Mail ngwa. N'ezie, ọtụtụ n'ime ha bụ na-abaghị uru. Ka ị na-mail ọcha, mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịmata otú ihichapụ kpam kpam ozi ịntanetị site na iPad. N'okpuru ebe a bụ mfe nzọụkwụ (bụghị nanị wepụrụ ozi ịntanetị si Mail ngwa, kamakwa site na ihe nkesa)
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Mail ngwa gị iPad. Open Igbe mbata na mgbata 'Dezie'. Na ala ekpe, kpatụ 'Mark All'> 'Mark Dị ka Gụọ'.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ Mail> oghe Igbe mbata> mgbata Dezie> Lelee a ozi. Na mgbe ahụ na ala, ị pụrụ ịhụ nhọrọ 'Paghaa' na-nyeere.
Nzọụkwụ 3. mbụ, pịa ma jide 'Paghaa' button na-eji gị ọzọ aka uncheck ozi i na-enyocha ke nzọụkwụ 2. Bugharịa mkpịsị aka gị kwụsịrị iPad ihuenyo.
Nzọụkwụ 4. Na ọhụrụ window, enweta na ekpofu ahịhịa. Nke a bụ ebe ọrụ ebube na-eme. Ị pụrụ ịhụ na niile ozi ịntanetị e kwagara ahịhịa. Na a ga-a ide window, na-agwa gị na e nweghị mail na niile. Site n'ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịga na ahịhịa nchekwa na enweta 'Dezie' na mgbe ahụ enweta 'Hichapụ All' na ala ala ka ihichapụ niile ozi ịntanetị.
Cheta na: mgbe n'itinye kwuru ụzọ n'elu ihichapụ kpam kpam mail na iPad, ma ọ bụrụ na ị laghachi Mail ngwa ozugbo, i nwere ike ịhụ mail ọnụ ọgụgụ ka na-adị. Echegbula. Nke ahụ bụ nnọọ ndị cache. Chere ole na ole nke abụọ ka mail ume n'onwe ya na-akpaghị aka.
Nchọpụta nsogbu: Olee otú m ihichapụ ehichapụ ozi ịntanetị na 'ịchọ' mma na m iPad?
-Eme ihe n'eziokwu, mgbe ị na-eji ụzọ kwuru n'elu ihichapụ kpam kpam ozi ịntanetị site na iPad (iPad Pro, iPad Obere 4 akwado), mgbe search ke 'Chakwasa ihie', ị ga-ahụ na ha na-ka ebe a. Nke ahụ bụ n'ihi na ọbụna ezie na ị na-na na-ehichapụ ha na gị na iPad, ha ka na-adị ebe gị iPad ma apụghị ịhụ anya. Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka ha ka ha laa ruo mgbe ebighị ebi, mgbe ahụ, ị ga-agbalị Wondershare SafeEraser 's' Hichapụ All Data 'ihichapu gị iPad kpamkpam. Site n'ime nke a, ozi ịntanetị ga-ewepụ ruo mgbe ebighị ebi. Ma na-elekọta, na atụmatụ nwekwara ewepu ọzọ data. Right now Mmepụta na-arụ ọrụ ike iji mee ka o kwe omume ka ọrụ ihichapụ kpam kpam Gburu on iPad, na-enwe olileanya na ọ ga-abụ dị anya.
> Resource> Ihichapu> Olee ihichapụ kpam kpam ozi ịntanetị site na iPad